I-Maceration ne-Aromatisation yi-Sonication - Hielscher Ultrasound Technology
I-Ultrasonic aromatisation nokunambitheka kwamafutha adliwayo kususelwa esikhungweni sokudonsa i-flavour complements kusuka kuma-botanicals afana namakhambi, izinongo, izithelo njll Sonication inqubo yokuqinisa, ekhipha izingxenye ze-bioactive emafutheni. Njengendlela yokuhlanza engeyona eyokushisa, ama-ultrasonics anqunyelwa kusengaphambili ukulungiselela ama-botanicals nama-oyili angathisi ukushisa.
Amafutha Omuhle Ohlotshisiwe
Amafutha ama-Aromatised noma anambithekayo achazwa njengamafutha afakwe imifino, amakhambi, izinongo noma izithelo ukuze athuthukise iphunga lawo kanye nezimpawu zalo. Ngaphandle kokuthuthuka kwezimpawu zemizwa, uwoyela odliwayo uthuthuka ngama-phytochemicals akhuthaza ezempilo, akhona kuma-botanicals afana namakhambi nezinongo. Ama-polyphenols, ama-flavonoid, ama-terpenes, ama-anthocyanins, ama-complements acomatic, nama-polysaccharides aziwa kakhulu ngeqhaza lawo empilweni nasenhlalakahleni. Amafutha afana ne-olive olive, i-avocado oil, i-sunflower oil uwoyela, i-rapeseed / canola ye-oyili neminye imifino yezithelo noma yembewu yizithwali ezingavamile zokuxutshwa nokunambitheka kwe-bioactive.
I-Ultrasonic Maceration ne-Aromatisation
Ukufakwa kwe-Ultrasonic kwamafutha adliwayo kukhipha amakhompiyutha e-phyto kanye nokunambitheka okuvela ku-botanicals njengezinongo, amakhambi, imifino noma izithelo futhi kuzixube ku-oyili. Ngenxa yemiphumela ye-ultrasonic cavitation, izinhlanganisela ze-bioactive zihlakazwa ngokuqinile ku-matrix kawoyela, okuthuthukisa isilinganiso sokumuncwa kanye ne-bioavailability yezakhi ezithuthukisa impilo emzimbeni womuntu kakhulu selokhu u-oyile encibilikisa i-lipophilic bioactive.
I-Maceration inqubo esetshenziswayo lapho kukhishwa izihlokwana zamakhambi ezibucayi noma eziguquguqukayo “kubanda”, inqubo engasebenzisi amafutha. I-Maceration ingachazwa njengohlobo lokufakwa kwamakhaza. Njengoba ngesikhathi se-maceration kungafakwanga ukushisa, i-maceration imvamisa iyinqubo ethatha isikhathi, ethatha isikhathi. Ukulungisa i-macerate, isitshalo sendawo (isb. Izinongo zomhlaba noma amakhambi ananyayo) imiswa endaweni eyi-liquid (ebizwa ngokuthi i-solvent) futhi ishiywe ukuze ihlale noma ifake isikhathi eside, esingaqala emavikini ambalwa kuya ezinyangeni ezimbalwa . Isikhathi senqubo ye-maceration sihlangene nokuqina kwephunga.
I-Ultrasonication ikhulisa kakhulu isinyathelo se-maceration ngokusebenzisa imicrophyxing eningi kanye nezidubedube kwinhlanganisela ye-maceration. I-Sonication ingasheshisa i-maceration yendabuko, ethatha amasonto noma izinyanga, kakhulu – nokuthola imiphumela efanayo yokufakelwa ukunambitheka kungakapheli imizuzu embalwa. Njengendlela engashisi, ye-mehendi, i-maceration ye-ultrasonic ikhulisa ukudluliswa kwenqwaba futhi igcina nezinto ezihlanganisiwe ezinjenge-volatiles, polyphenols namanye ama-phytochemicals. Lokhu kwenza i-maceration ye-ultrasonic ibe indlela ehlukile yokukhiqiza ngokushesha, ngempumelelo kwama-macerates aphezulu.
Enye inzuzo ye-maceration ye-ultrasonic ukusetshenziswa kwezinto ezintsha zezitshalo. Ku-maceration yendabuko, impahla entsha ingasetjenziswa kepha ithambekele ekuphangweni kwe-microbial, ngoba impahla ye-botanical kumele ihlale isikhathi eside kakhulu emafutheni. I-Ultrasonic maceration inqubo esheshayo yemizuzu eminingana, okusho ukuthi asikho isikhathi eside sokukhula kwamagciwane. Ngaphezu kwalokho, i-ultrasonic cavitation yaziwa kakhulu ukuphazamisa nokwenza amaseli we-microbial futhi ibe nomthelela ekuqineni kwe-macerate.
Amafutha we-ultrasonically aromatised anjenge-olive olive olive noma i-sunflower oil aboniswe ukuqina okuphezulu njengoba ama-antioxidants angeziwe avela emasimini anciphisa i-oxidation eyinhloko yamafutha e-oyili. I-Oregano, i-thyme, i-pepper eshisayo eshisayo, ugarliki, i-laurel, i-basil, amaqabunga omnqumo, i-sage, i-lavender, i-rosemary, i-psyhe, i-leyimu, i-orange kanye nezinye izithelo, amaqabunga, izimbali, izimpande, imbewu kanye namagxolo kucebile ngamafutha abalulekile, ama-polyphenols , ama-flavonoid nezinye izinto ezihlanganisiwe. I-Ultrasonic maceration kanye ne-aromatisation kuyindlela ephumelelayo, esheshayo nephephile yokuthuthukisa uwoyela odliwayo, ukubanikeza okuqukethwe okuphezulu kwe-antioxidant ne-polyphenol, ukuqina kwe-oxidation nephrofayili yokunambitheka ecebile.
Izinzuzo ze-Ultrasonic Aromatization:
Isizinda esiphelele se-flavour
Ukufiphaza nokwenza i-aromatising oiri edliwe yi-maceration ye-ultrasonic kuyinqubo enamandla futhi esheshayo yokuvuselela uwoyela nokukhiqiza okuthiwa yi-“gourmet oyile”. Ngobubanzi bokunambitheka, i-aromatisation ye-ultrasonic ingeza inani lemikhiqizo yamafutha.
Iprosesa yokususa i-Ultrasonic I-UIP4000hdT for maceration kanye nephunga lamafutha adliwayo
Ama-Ultrasonicators wezezimboni Zokuhlanza Amafutha Osetshenzisiwe
Amaprosesa anamandla aphezulu we-ultrasonic asevele asetshenziswa kabanzi embonini yokudla ukukhipha ukunambitheka kanye nezinto ezihlanganisiwe, ukufaka i-oyili ngotshwala obusekelwe emanzini, noma homogenize izinto ezahlukahlukene. Emafutheni adliwayo anongiwe, isizinda esisizwayo se-Ultra ivumela ukukhiqizwa kwamafutha wekhwalithi ephezulu enephrofayili yokunambitheka egcwele. Ngasikhathi sinye, ukwenziwa kwe-maceration ne-aromatization kuqinisekisa njengendlela esheshayo, elula, ephephile futhi engabizi kakhulu.
Ngokusebenzisa i-maceration esiza ngosizo lwe-ultrasonical, ukukhipha i-flavour ne-aromatisation, izinongo eziphelele (ie amaqabunga, izimbali, imbewu, amagxolo njll), izinongo zomhlaba (ie impuphu), uwoyela obalulekile noma i-oleoresin ingasetshenziswa.
I-Hielscher ultrasonics yenza ama-processor aphezulu we-ultrasonic asebenza kakhulu kusuka elebhu nasebhentshini-phezulu kuya esikalini esigcwele sezimboni ngomthamo wokucubungula wamathani amaningana ngehora.
UMaarit J. Rein, uMathieu Renouf, uCristina Cruz ‐ Hernandez, uLucas Actis ‐ Goretta, uSagar K. Thakkar, uMarcia da Silva Pinto (2013): I-Bioavailability yezakhi zokudla ezixubile: uhambo olunzima lokuya e-biioefficacy. IBritish Journal of Clinical Pharmacology 2013 Mar; 75 (3): 588-602.
U-Petigny L., Périno-Issartier S., Wajsman J., Cmat F. (2013): Isisetshenziswa Sokubambisana Ne-Continuous Ultrasound esixhasayo se-Boldo Leaves (Peumus boldus Mol.). Ijenali yomhlaba jikelele ye-Molecular Science 14, 2013. 5750-5764.
Inqubo yendabuko yokuqothula, lapho amafutha anjengamafutha omnqumo noma owolanga afakwa kuwo ngamakhompiyitha amnandi namafutha abalulekile we-botanicals (isib. Izinongo, amakhambi, izithelo njll.), Inqubo yokufaka, esebenza ngokufaka izinto zesitshalo ku uwoyela. Le yinqubo ehamba kancane, ethatha amasonto ambalwa iye ezinyangeni ezimbalwa, ngoba ukudluliselwa kwesisindo phakathi kwama-solar we-botanical ne-oyile kuhamba kancane. Enye into, ebhekene nokuhamba kancane kwe-maceration yendabuko, izinga lokushisa ngesikhathi sokuluka kwemvelo. Njengokungena okubandayo, ukumiswa kwe-botanical ne-oyile kugcinwa endaweni yokushisa yasekamelweni ukuvikela izinto ezibuthakathaka ezibuthakathaka, ama-oleoresin namafutha abalulekile ekuwohlokeni kokushisa. Lezi zinto zihlehlisa inqubo bese zenza isikhathi esiningi.
Inqubo yokuqothula macal ingasetjenziswa ukufaka i-oyili edliwayo, kanye nama-oyile kanye namakhukhamba we-skincare, ama-tinctures okwelapha kanye notshwala. Amakhambi ajwayelekile nezinongo ezisetshenziselwa ukwenziwa kwe-maceration kwamafutha kanye ne-tinctures kufaka i-mint, i-basil, i-chilis, i-rosemary, i-thyme, i-vanilla, isinamoni, i-lavender, i-elderflower, i-calendula, i-St John Wort, i-sea buckthorn nabanye abaningi.
Amafutha ajwayelekile we-maceration yi-olive, imbewu ye-sunflower, ukhukhunathi, i-jojoba, i-rapeseed, i-flaxseed noma i-hemp. Ukulungisa ama-tinctures noma uphuzo oludakayo, utshwala busetshenziswa njengamanzi.
Amafutha adliwayo angamafutha zemifino akhishwe ezitshalweni. Amafutha lawo yi-triglycerides futhi asetshenziswa ekudleni, kokubili ekuphekeni nasekwenziweni kwezithasiselo. Isibonelo, i-olive yama-olive isetshenziswa njengamafutha okupheka, i-condiment nanjenge-supplement yokudla ngoba inothile ngamafutha e-omega 9. Ngaphandle kokusetshenziswa kwayo njengokudla, i-olive yama-olive nayo isetshenziswa njengomkhiqizo wokugcoba ukunakekelwa kwesikhumba nezinwele.
Amafutha adliwayo angakhishwa ezithelo (isib. Iminqumo, i-avocado, i-jojoba), amantongomane (isib. I-walnut, i-macadamia, i-almond), imbewu (isib. I-canola, i-sunflower, ifilakisi, i-hemp, i-argan) noma i-citrus (isib. Ulamula, i-bergamotte, i-grapefruit, okungamafutha abalulekile).
Inani elikhulu lemithombo ehlukahlukene yemvelo yezinto eziphilayo ezisebenzayo, eyaziwa nangokuthi iyasebenza, lingasetshenziswa ngokunamandla ukucebisa uwoyela odliwayo njengamafutha omnqumo asezingeni elithile.
Ama-phytochemicals amakhemikhali angenampilo ezitshalweni ezivikela noma zivimbele isitshalo ezifweni noma ezilwaneni. Lapho ukudla okucebile kwe-phytochemical kudliwa njengengxenye yokudla okunempilo, lezi zingxube zezitshalo zinemiphumela eminingi emihle emzimbeni ngokusebenza njengama-antioxidants, ama-hormone esivuseleli, ukuvusa i-enzymatic nokubonisa izakhiwo ze-antibacterial.
Izinhlobo ezahlukahlukene zezitshalo nezingxenye zezitshalo zingacebeka kuma-phytochemicals, njengemifino (isib. I-broccoli, ugarlic, i-fennel), izithelo (amajikijolo, amagilebhisi, amawolintshi), amantongomane nembewu (isib. Ama-alimondi, ifilakisi, ama-hazelnuts, ama-macadamia, ama-pepitas, ama-walnuts ), izitshalo ezi-medinical (isib. echinacea, gingko, periwinkle, valerian), amakhambi (isib. hawthorn, hops, licorice, rooibos, schizandra), okusanhlamvu (i-oats, i-quinoa, ibhali) kanye ne-legumes (isib. ama-soya
Ama-phytochemicals angahlukaniswa ngama-alkaloids, ama-anthocyanins, ama-carotenoids, ama-coumestan, ama-flavonoids, ama-hydroxycinnamic acid, ama-isoflavones, ama-lignan, ama-monophenols, ama-monoterpenes, ama-organosulfides, ama-phenolic acid, ama-phytosterols, ama-saponins, ama-stylbenes, ama-triterpenoids, kanye ne-xanthpenoids.
Amafutha abalulekile uketshezi ohlanganisiwe we-hydrophobic aqukethe amakhompiyutha angaguquki amakhemikhali avela ku-botanicals. Amafutha abalulekile ayaziwa nangamafutha ashubile, uwoyela wama-ethereal, i-aetherolea. Amafutha abalulekile kwesinye isikhathi abizwa ngamafutha wesitshalo akhishwe kuwo, njengamafutha asoso, uwoyela we-teatree, noma uwoyela we-bergamotte. Amafutha abalulekile kuthiwa “kubalulekile” ngoba aqukethe “umongo we” Iphunga lesitshalo. Lapho usetshenziselwa uwoyela obalulekile, igama “kubalulekile” akusho ukuthi uwoyela ungumbala ongenakubalwa, njengoba ngokwemibandela ebalulekile ye-amino acid noma yamafutha acid ebalulekile, abizwa kanjalo ngoba adingekayo ngokomsoco yisidalwa esiphilayo esinikeziwe. Amafutha abalulekile akhiqizwa yi-distillation, i-hydrodistillation, ukukhipha i-solvent noma ukucindezela. Ukuphathwa kwe-Ultrasonic kuvame ukusetshenziselwa ukuqinisa nokusheshisa isilinganiso sokukhishwa futhi kukhulise isivuno samafutha esibalulekile.
Funda kabanzi mayelana ne-hydrodistillation ye-ultrasonic yamafutha abalulekile!
Ama-Oleoresin ayinhlanganisela yemvelo kawoyela ne-resin ezitshalweni. Ukuba yinto ehlanganiswe kakhulu, ama-oleoresin angamakhompiyutha aqinile aqukethe i-resin ekuxazululeni ku-oli obalulekile kanye / noma wamafutha (trigylcerides).
Ngokuphikisana namafutha abalulekile, i-oleoresin inezinto eziningi ezisindayo, ezingathathi hlangothi futhi ezihlanganisiwe ze-lipophilic, ezinjengama-resins, i-waxes, amafutha kanye namafutha anamafutha.
Ama-Oleoresins angalungiswa kusuka ezinhlamvwini, njenge-basil, capicum, Cardamom, imbewu celery, bark nesinamoni, i-clove bud, i-fenugreek, i-fir balsamu, i-ginger, i-jambu, i-labdanum, i-mace, i-marjoram, i-nutmeg, iparsley, i-pepper (emnyama / emhlophe), i-pimenta (allspice), irosemary, i-sage, i-savory, i-thyme, i-turmeric, i-vanilla, amaqabunga e-West Indian bay. I-solvents esetshenzisiwe ayibonakali kahle futhi ingaba yizi-polar (ie alcohols) noma i-nonpolar (ie hydrocarbons, carbon dioxide). Indlela yokukhipha i-Ultrasonic iyahambisana nalezo zokuncibilikisa futhi isheshise isilinganiso sokukhishwa kanye nesivuno.
Kokubili, uwoyela obalulekile nama-oleoresin ayizinto zemvelo ezinhle kakhulu, ezingangezwa njengesithako sokufaka ukunambitheka kokudla okuhlukahlukene neziphuzo. Amafutha abalulekile nama-oleoresin ahlukaniswe izitshalo nge-isizinda (isib. Isizinda esisizelwe nge-ultrasonical) kanye no-distillation okwalandela. Ama-herbs, izinongo nezinye izitshalo zisetshenziswa njengezinto ezingavuthiwe zokwenziwa kokwenza uwoyela obalulekile nama-oleoresin.